चुनावले देखाइदियो घमण्डी नेताको हैसियत - Dainik Nepal
चुनावले देखाइदियो घमण्डी नेताको हैसियत
जम्बला लामा २०७४ असोज १३ गते २०:१२
– जम्बला लामा
प्रदेश नम्बर दुईमा सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचनको नतिजाले घमण्डी र अहंकारको धब्बा भएको नेताहरुको हैसियत देखाइदिएको छ । चुनाव अघि १०० सीट जित्छु भन्ने काँग्रेस, मधेशबाट हामी नै पहिलो पार्टी अर्थात सय सिट ल्याउछौं भन्ने राजपाका नेताको अहंकारी अभिव्यक्ति चुनावमा फिक्का सावित भएको छ ।
असोज २ गते प्रदेश नम्बर दुईमा सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचनको नतिजाले घमण्डी र अहंकारको धब्बा भएको नेताहरुको पहिचान जनताले देखाएको छ । अर्थात् चुनाव हुनुभन्दा अघिदेखि नै नेपाली काँग्रेसका नेताहरु भन्दै थिए कि दुई नम्बर प्रदेमा काँग्रेसले १०० सीट ल्याएर पहिलो पार्टी हुनेछ । यस्तै, किसिमको अभिव्यक्ति राजपाको नेताहरुले पनि मधेशबाट हामी नै पहिलो पार्टी अर्थात सय सिट ल्याउने छ भनि अहंकारको अभिव्यक्ति दिएका थिए । साथसाथै एमाले पार्टीले पनि आफ्नो पार्टीले ६० देखि ७० सीट जित्नेमा ढुक्क छ भनेको नै थियो । तर, समयको परिवर्तनले गर्दा साथसाथै चुनाव हुनुभन्दा १ दिन अघिदेखि नै जनताको घरदैलोमा नयाँ नयाँ नोटको बिटो पुर्याई जनतालाई पनि दशैंको खसीबोका सरह दाम दिएर जनताको मत किन्ने प्रयास गर्दा यी सबै पार्टी एकलौटी जनमत हात पार्न सकेनन् ।
नागरिकको बुझाई छ जुनसुकै पार्टीले आफ्नो कार्यकर्ता नेतालाई भन्दा पनि धनाढ्य व्यक्तिलाई अर्थात् व्यपारीलाई रुचाई टिकट दिने र जसरी हुन्छ नोट खर्च गरी भोट लिने काम भएको सोचले गर्दा अब आउँदो केन्द्र र प्रदेश चुनावलाई कसरी कुन रुपले कस्तो व्यक्तिलाई टिकट दिने भन्नेमा नै यी नेताहरु अन्यौलमा परेको छ । यस्तै, तालको चुनाव गर्ने हो भने हाम्रो नेपालको राजनीतिमा ठूलो धक्का आउने सम्भावना देखिन्छ । अर्थात् आफ्नो पार्टीको कार्यकर्ता र नेतालाई भन्दा दामलाई टिकट दिने चलनले गर्दा नेपालको राजनीतिको भविष्य व्यपारी उद्योगपतिहरुको हातमा पुग्ने हो की भन्ने जनविचारहरु आएको छ ।
नागरिकले यसो हेर्दा एक नम्बर पार्टी नेपाली काँग्रेस २ नम्बर प्रदेशबाट प्रथम बन्न सफल भएको छ । तर, काँग्रेसले भन्दै गरेको थियो हामी १०० सीट जित्दै प्रथम पार्टी बन्छौं । र, मधेशको माग संविधान संशोधन विधेयकलाई बहुमत पुर्याई पास गराउने छु । तर, यो संविधान संशोधन त, मधेशी जनताको होइन रहेछ यदि मधेशी जनताको माग भएको भए नेपाली काँग्रेसलाई शतः प्रतिशत मत दिएर संविधान संशोधन विधेयकलाई पास गराउनु दिने र संविधान स्वीकार्य गराउने निर्णय हुने थियो । तर मत ठिक विपरित आयो । अर्थात् त्यो मत भनेको नोटको भोट मात्र हो की भन्ने जनआँकलन आएको छ । यथार्थमा भन्नुपर्दा मधेशी जनतालाई संशोधन होइन विकास, रोजगारी, शिक्षा र कृषि उद्योगको निकाश चाहेको ध्रुवसत्य हो । काँग्रेसको भोट बैंक भन्ने तराई मधेसबाट नै धेरै कम मात्रमा मत आएको मधेशी विश्लेषकहरुको भनाई आएको छ ।
हिरो उपेन्द्र यादव
चुनावी परिणामपछि संघीय समाजवादी फोरम नेपालको अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले भनेका छन्– मेरो पार्टी मधेशी विरोधी भन्नेहरु पनि साइकल चढेर मेरो पछि पछि आएको देख्दा ठिट लाग्यो । अर्थात् फोरम नेपाल प्रदेश नम्बर दुईमा दोस्रो पार्टी बनेको फोरमलाई राजपा नेपालले मधेश विरोधी भनि मधेशको जनतालाई उक्साएर, उपेन्द्र यादव मधेश विरोधी हो भनि फिजाएको हल्ला निराधार रहेको पुष्टि भयो । तर खोइत राजपा मधेशी जनतापक्ष भनेको राजपा पार्टी किन तेस्रो स्थानमा नै खुम्चिन परेको ? यसको जवाफ राजपासँग छ जनतालाई दिन । मतगणना सकिएर अन्तिम परिणाम आइसक्दा संघीय समाजवादी फोरम नेपाल दोस्रो स्थान जित हासिल गरी आफ्नो स्थान कायम गर्न सफल भएको छ । उपेन्द्र यादव ०६२÷०६३ को जनआन्दोलनको पनि उनी हिरो हुन्, अब आएर स्थानीय सरकारको पनि २ नम्बर प्रदेशको हिरो नै हुन् भन्ने नागरिकको बिचार हो । अव हुनै लागेको प्रदेश र केन्द्र निर्वाचनमा पनि २ नम्बर प्रदेशमा यादवको नै जीत निश्चित जस्तो भएको मधेशी जनसमुदायलाई महशुस भएको छ ।
२ नम्बर प्रदेशमा राजपाको दुषपरिणाम मत आएको कारण नै राजपाको संविधान संशोधन विधेयक नै जनविपरित माग भएको मधेशी जनसमुदायले ठहर गरेको छ । अर्थात् राजपाले संविधान संशोधन विधेयक संशोधन नभएको भनि बखेडा निकाली प्रथम स्थानीय तहको चुनाव वहिस्कार गरेको कारण सरकार र निर्वाचन आयोगले ३ पटकसम्मको लागि अर्थात् १, २ र ३ नं. प्रदेश २०७४ वैशाख ३१ र दोस्रो पटक निर्वाचन २०७४ जेष्ठ ३१ गते ४, ५ र ७ प्रदेशको चुनाव सम्पन्न गराई तेस्रो पटक २ नं. प्रदेश निर्वाचन २०७४ अशोज २ गतेलाई कायम गरी राजपालाई मनाएको थियो ।
राजपाको कारणले देशलाई ठूलो आर्थिक भार पनि थपियो । त्यो कसले गर्दा हो भने यी सबै कार्य जनविपरित संविधान संशोधन विधेयकको बहानाबाजीका कारण नै हुन् भन्ने मधेशी जनसमुदायले बुझि सेकेको थियो र त्यसैको अन्जाम राजपालाई मधेशी समुदायले तेस्रो स्थान रहुन् भनि नतिजाहरु देखाएको हुन् भन्ने मधेशी जनविश्लेषणको भनाई आएको छ । राजपा मण्डलको लक्ष्य थियो मधेशी जनतालाई वेकुफ बनाई संविधान संशोधन विधेयक प्रकृयाबाट सफल गराई आफ्नो पार्टीको स्वार्थ पूर्ति गराई जनतालाई रुवाई गराउने खेल थियो । अर्थात् राजपाको खेल थियो पहाड र हिमालको जनतालाई मात्र होइन यीनीहरुले खेलेको खेल भने तराई मधेशको जनता र यी महान् भन्ने नायक नेता काँग्रेस र एमालेलाई समेत पनि गुलामी बनाएर तह लगाउने खेल थियो ।
राजपाको संशोधन विधेयक वास्तवमा हो भने जनपक्ष नभई उनीहरुको आफ्नो राजनीतिक स्वार्थको लागि मात्र निहित हो भन्ने मधेशी जनताको बुझाई भएको कारणले नै राजपाको हालको मत परिणाम अर्थात् दुषित मत परिणामको नतिजा २ नं. प्रदेशको स्थानीय तहको चुनावमा आएको मत परिणामले देखाएको छ । संशोधन विधेयक जनपक्ष भएको भए भर्खरै मात्र सम्पन्न भएको निर्वाचनको परिणामहरु सबै राजपा पक्ष हुने थियो । तर किन त्यस्तो भएन ? मात्र राजपा मण्डलको काँग्रेसबाटनै चोइटेर आएको राज पाको मण्डलको नेताहरु राजपा पार्टीमा परिणत भएर हामी मधेशी जनता पक्ष हौं भनि धाग लाउनु मिल्छ ? कुनै तुक छैन भन्ने मधेशी विश्लेषकहरु भन्छन् । यी नेताहरु २०६२/०६३ को जनआन्दोलनमा नेपाली काँग्रेस नै हुन् । खोइ त सय सिट जित्नेछ भन्ने अहंकार गरेको राजपाको यस्तै घमण्डीको कारण उनीहरु तेस्रो स्थानलाई चित्त बुझाएर बस्नु परेको छ ।
महन्थ ठाकूरलाई लाज पनि लाग्न छाडेको महशुस भएको छ । अर्थात् उनले तेस्रो चरको स्थानीय तहको निर्वाचनमा राजपाले उनको अपेक्षा अनुसारको जित हासिल गर्न नसकेपछि ठाकूरले संविधानलाई नस्वीकार्ने अभिव्यक्ति दिई पुरानै रटान दोहोर्याएको समाचार अखबारमा पढ्न पाए । के यो देश महन्थ ठाकूरको बाउको सम्पत्ति हो । उनले जे भने, भन्यो त्यही हुनु पर्नेछ ? २ नं. प्रदेशको जनसमुदायले आक्रोस पोखेको सुन्नमा आएको छ । र उनले चुनावको अघिल्लो दिन आपूmले मतै नहालिकन काठमाडौंमा सितल थाप्न भनि आफ्नो सिसामहल घरमा आराम गर्न आएको होइन ? उनी आफैलाई चुनाव नै नचाहेको रहेछ त ? त्यसैको कारण भोट नखसाली काठमाण्डौमा आएर आरामसाथ दिन विताए ।
घमण्डीको सिकार २ : माओवादी केन्द्र
माओवादी एकताकेन्द्रले पनि २०७४ अशोज २ मा भएको २ नं. प्रदेशको स्थानीय तहको निर्वाचनमा माओवादी पार्टी मधेशमा लभ परेको छ माओवादी बाहेक तराई मधेशलाई सुख शान्ति र विकास दिनु अरु पार्टीले सक्दैन भनि भाषण गरेको नै थियो अध्यक्ष प्रचण्ड दाहालले र हामीले सय सिट जितेर देखउने छौं पनि भनेको थियो । तर प्रचण्ड महोदयजी तपाईको पार्टीले चौथो स्थान कायम गर्न पनि मुस्किलले त्यति परिणाम ल्याई तपाई चौथोमा नै चित्त बुझि बस्नुभन्दा अरु केही उपाय छैन । धन्यबाद तपाईलाई । र अरु पार्टीलाई सोत्र बनाउने र गाली गर्नुभन्दा घमण्डी भएको दुषपरिणाम तपाईलाई मधेशी जनताले तपाईलाई मानसम्मान गरी बल्लबल्ल चौथो स्थानमा पु¥याएको मधेशी जनसमुदायको आवाज आएको छ ।
एमालेमाथि चौतर्फी घेरबान्दी
अर्थात् चौतर्फीको घेरबन्दी हुँदाहुँदै पनि नेकपा एमाले नै प्रथम पार्टी भएको भनि मधेशी जनसमुदाय र सामाजिक संजालमा व्यापक भएको छ । धन्यबाद छ देशभक्त पार्टी नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी एमालेलाई मधेशी जनताको तर्फबाट । त्यतिमात्र नभई भारतको पनि घेराबन्दी गरी राजपालाई तीर बनाएको कुरा सर्वविधितै छ । तर हारेर पनि प्रथम पार्टी नै भएको नागरिक समाजलाई पनि महशुस भएको छ । अन्तिममा हाम्रो सर्वमान्य नेताहरु र समस्त जनसमुदायलाई २०७४ अशोजको बडा दशैंको उपलक्षको मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौं । र, महान् नेताजीहरु जनता र कार्यकर्तालाई कुकुर भुकेको जस्तो गरी र सुँगुर घुरेको जस्तो गरी घमण्ड नदेखाउन अनुरोध गर्दछु ।